होस्टग्याटरको ५० प्रतिशत डिस्काउन्ट – आजको लागि मात्र (अफर सकियो) – Nepali Tech Blog
होस्टग्याटर वर्डप्रेस वेबहोस्टिङमा सबैभन्दा मन पराइएको कम्पनी मध्येको एक हो । गुणस्तरिय वेबहोस्टिङका लागि यसले विभिन्न समयमा धेरै अवार्डहरु पनि जितेको छ । मैले केहि ब्लगहरु होस्टग्याटरमा होस्ट गरेको छु । सस्तो मुल्यमा पाइने तर अचम्मै राम्रो सुविधा दिने वेबहोस्टिङ हो यो । यसले अनलिमिटेड होस्टिङ, अनलिमिटेड ब्यान्डविथ, जति पनि डोमेन थप्न मिल्ने, स्टान्डर्ड कन्ट्रोल प्यानल लगायत एउटा फ्रि डोमेन पनि दिन्छ । वर्डप्रेसले सिफारिस गरेका केहि आधिकारिक वेबहोस्टिङ पनि हो यो ।
पढ्नुहोस् : किन किन्ने होस्टिङ ?
यो कम्पनीको सपोर्ट सिस्टम भने मन हर्ने छ । यदि तपाई वेब होस्टिङका बारेमा सामान्य ज्ञान पनि राख्नु हुन्न अनि केहि समस्या आए कसरी समाधान गर्ने केहि जान्नु हुन्न भने होस्टग्याटर वरदान हो । यसको सपोर्ट सिस्टममा लाइभ च्याट गर्नुस् वा फोन, तपाईका समस्या तुरुन्त समाधान गरिदिन्छन् । मैले मेरो एउटा साइटमा अनावश्यक प्लगिन राखेर समस्या आयो । मैले लाइभ च्याटमा गएर समस्या बताएँ, तिनीहरुले २ घण्टाभन्दा बढि समय लगाएर पुरै साइट ठिक बनाइदिए ।
आज यही होस्टिङ ५० प्रतिशत छुटमा आएको छ । होस्टग्याटरको ब्लगमा लेखिए अनुसार अमेरिकन रेड क्रसको मासिक कार्यक्रम सफल बनाउँनका लागि यो छुट योजना ल्याइएको हो । आज विक्री हुने हरेक होस्टिङबाट एक डलर अमेरिकन रेड क्रसलाई चन्दा दिइनेछ ।
मौका सहि छ । किन्ने होइन त ? होस्टग्याटरको वेब होस्टिङ ? थप जानकारीका लागि तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ।
थप जानकारीका लागि : ५० प्रतिशत छुटमा होस्टग्याटर